Google dia miahiahy momba ny fitomboan'ny Samsung | Avy amin'ny Linux
Google dia miahiahy momba ny fitomboan'ny Samsung sy ny toeran'ny mpitarika eo amin'ireo mpamokatra mpiara-miasa Android, hoy ny Wall Street Journal.
Nandritra ny fivoriana tamin'ny taon-dasa dia nilaza i Andy Rubin, talen'ny Android, fa "nankasitraka" ny fahombiazan'ny Samsung izy, saingy niahiahy ny amin'ny toeran'ny Google vis-à-vis Samsung manoloana ireo mpifaninana aminy. Raha ny mpivarotra lehibe indrindra eo amin'ny tsena android, Samsung dia afaka manao zavatra hafa amin'ny mpamokatra hafa amin'ny Android, na ny ratsy kokoa aza, mety handeha amin'ny lalan'i Amazon izy ary mamolavola ny kinovan'ny rafitra misy azy.
Samsung Izy io dia efa manana 39,6% amin'ny tsenan'ny smartphone eran-tany, ary ny ankamaroan'ireo fitaovana ireo dia miorina amin'ny sehatra Google. Ny mpanamboatra hafa toa ny LG sy ny Motorola an'i Google dia tsy manana fahombiazana mitovy amin'ny Android. Ny tranga dia miteraka fifandraisana fiankinan-doha amin'ireo orinasa roa ireo.
Amin'ity scenario ity, ny Motorola dia mety ho karatra trompetra an'i Google. Nahazo tamin'ny 2011, ireo vokatra natombok'i Motorola Mobility teo ambanin'ny elo Google dia tsy nahafa-po ny tsena, saingy mety ho lakilen'ny Google ny hitazomana ny fifehezana ny rafitra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » maro » Google dia miahiahy momba ny fitomboan'ny Samsung
Nahitsy ny lesoka CUPS Tree connect (NT_STATUS_ACCESS_DENIED)